आदम र Gaia – मुक्त सुतली सेक्स खेल
आदम र Gaia छ Primordial संसेचन खेल
When it comes to अश्लील खेल, सबै प्रकारका छन् विधाहरू मा आधारित सबै प्रकारका को सनक. त्यहाँ देखि खेल सरल सेक्स सिमुलेटर गर्न आरपीजी खेल मा धेरै ध्यान केंद्रित कथा र चरित्र निर्माण । तर, मेरो वर्ष मा सक्रिय वयस्क मा खेल उद्योग, म कहिल्यै देखेको छ, एक खेल संग यस्तो विषय हो । तपाईं चाहनुहुन्छ भने गर्न मजा को एक बिट रात र जस्तै महसुस एक परमेश्वर, तपाईं खेल्न गर्नुपर्छ आदम र Gaia. I don ' t know if नाम को यो खेल मा तपाईं दिन्छ कुनै पनि विचार के को कार्य छ, तर गरौं लाग्छ यो माध्यम । आदम पहिलो मानिस, जो बीउ सिर्जना गर्न गयो मानिसजातिको., लागि रूपमा, Gaia, त्यो हो आमा धरती, प्रकृति नै गर्न आवश्यक छ कि निषेचित गर्न spawn जीवन ।
म दिन, तपाईं कुनै पनि अधिक सङ्केत? यो संसेचन एक खेल. तर बस को कुनै पनि प्रकारको संसेचन खेल. तपाईं वरिपरि जान एक baren भूमि र बारी मा यो एक बुढेसकालमा संसारमा सबै, आफ्नो कुखुरा र शरारती आग्रह. आदम र Gaia संसार-भवन आरपीजी मा जो तपाईं प्राप्त हुनेछ अन्वेषण गर्न नक्शा लागि देख sexy chicks and horny राक्षस तयार भएका हुन railed wildest तरिकामा सम्भव भनेर planed हुनेछ भरिएको जीवन फेरि । सबै खेल बारे छ, मा बिन्दु । त्यहाँ एक धेरै ग्राफिक कार्य मा जा किनभने, यो छ एक सुतली खेल, वा रूपमा पनि जानिन्छ, एक पाठ-आधारित खेल हो । , तर त्यहाँ केही ग्राफिक अभ्यावेदन वर्ण, जो गर्न अर्थ छन्, कृपया आफ्नो कामुक आवश्यक छ । तर, यो खुशी को यो खेल खेल देखि आउछ कथा, जो मा तपाईं हुनेछ immerged. सबै मा सबै, यो अंतिम संसेचन कल्पना । तपाईं प्राप्त गर्न बनाउन दुनिया संग आफ्नो कुखुरा. कसरी सुन्दर छ?
एक उत्कृष्ट सुतली खेल तपाईं सम्झना गर्न को हरेक पाठ आधारित भक्ति शीर्षक
दुई कुराहरू छन् बनाउने यो खेल यति अचम्मको छ । म कुरा गर्दैछु के को कथा बारे र कसरी राम्रो लेखिएको छ. यदि तपाईं चाहनुहुन्छ हुनेछ भनेर केहि, तपाईं प्रेरित, के राम्रो विषय भन्दा अन्य proliferation को जीवन नै । यो संसेचन सनक यो खेल मा लिन एक पवित्र आकार when you think about the fact that you don ' t just स्प्रे सह भित्र केही slut pussies. आफ्नो सह हुनेछ वास्तवमा जीवन बनाउन, बढ्न र मलाई लाग्छ कि दुवै तातो र सुन्दर एक नै समय मा. अर्कोतर्फ, यो बाटो को कथा लेखिएको छ धक्का हुनेछ आफ्नो बटन मा ways you didn ' t even know they could be धक्का., तपाईं प्राप्त हुनेछ दुवै महिला र mythical creatures that you need to impregnate खेल भर. म प्रेम को धेरै आदर भुक्तानी र संस्कृतिका कि शामिल थिए, यस खेल छ । यो chicks मा खेल द्वारा प्रेरित वर्ण मा उपस्थित मिथक को सृष्टिको देखि यति धेरै sources. You ' ll also find यति धेरै furry वर्ण मा आधारित छन् जो जनावर हो कि पर्याय फर्टिलिटी, यस्तो सेक्सी प्यारा खरायो र मौरीले. Centaurs, nymphs, र सबै प्रकारका अन्य प्यारा राक्षस हो वर्तमान मा खेल. अर्कोतर्फ, तपाईं पनि धेरै पूरा मानव chicks मा आफ्नो बाटो ।
Gameplay, ग्राफिक्स र कल्पना मा आदम र Gaia
आदम र Gaia एक छ सबै भन्दा राम्रो खेल को थिए भन्ने कहिल्यै सृष्टि सुतली शैली र यसको प्रमाण छ कि तपाईं को आवश्यकता छैन शानदार ग्राफिक्स सिर्जना गर्न एक उत्कृष्ट नमूना हो । तर, खेल गरेको इन्टरफेस हेर्न गर्छ असल र यो एक मेनु कि दुवै नेभिगेट गर्न सजिलो र कुशल छ । सबै stats, सूची, क्षमता र अरू सबै कुरा तपाईं को आवश्यकता गर्न अग्रिम माध्यम खेल मा पाउन सकिन्छ the left-hand side of the screen. त्यसपछि त्यहाँ कथा विन्डो जहाँ सबै कार्य हुन्छ । , मा एक पहेलो चर्मपत्र-जस्तै पृष्ठभूमि तपाईं प्राप्त हुनेछ एक राम्रो लिखित कथा संग यति भनेर विस्तार you don ' t even need दृश्य हुन्छन् । तथापि, तपाईं प्राप्त गर्न केही तस्बिरहरू तपाईं मदत गर्नेछ भन्ने थप आफूलाई डुबाउनु को कथा । म कसरी प्रेम वर्ण are represented in the game. एक हात मा हामी सबै सेक्सी राक्षस हो जो प्रतिनिधित्व गरेर केही हलिउड र hentai वर्ण, जो केही तपाईं चिन्न सक्छ. र यो आउँदा मानव chicks, तपाईं निश्चित तिनीहरूलाई थाह जब तपाईं देख्नुहुनेछ कसरी तिनीहरूले प्रतिनिधित्व । रचनाकार प्रयोग को फोटो प्रसिद्ध अश्लील तारा लागि अन्तरक्रिया chicks., Faye Regan, मिया खलीफा र Ava College are amongst the chicks थिए जो मा फर्केर वर्ण यस खेल मा. आफ्नो मिशन हुनेछ नेभिगेट कथा र प्रयोग सबै आफ्नो रणनीति तरिकामा हुनेछ भनेर आश्वस्त कुल संसेचन को सबै chicks मा खेल.
खेल्न आदम र Gaia मा मुक्त लागि हाम्रो साइट
यो छ. ती मध्ये एक आश्चर्य खेल गरे कि डेवलपर्स प्रसिद्ध छ । यो ahs सबै सिद्ध बारे देखि, यो कथा र षड्यन्त्र शैली र ग्राफिक्स. लागि एक सुतली खेल, यो धेरै अधिक रोमाञ्चक औसत भन्दा उद्योग को. र त्यो किनभने विकासकर्ताहरूको सँगै काम आफ्नो दर्शक संग गर्न बग तय थप्न र सबै प्रकारका अनुरोध विशेषताहरु । दुःखको कुरा, परियोजना रोकियो थियो । त्यहाँ हुनेछैन कुनै पनि नयाँ अपडेट कथा वा नयाँ वर्ण. But I 'm sure you' ll have धेरै मजा को घन्टा संग कार्य खेल को रूप, यो छ ।
तपाईं गर्न सक्छन् यो खेल मा सबै पूर्ण छ. हाम्रो वेबसाइट मा संग, कुनै paywalls संग, कुनै डेमो प्रतिबन्धको र कुनै जोखिम रही को आफ्नो पहिचान उजागर वा आफ्नो उपकरण संक्रमित । तपाईं आवश्यक सबै छ, इन्टरनेट पहुँच र यो खेल हुन तयार छ खेलेको । यो काम गर्दछ मा बिल्कुल कुनै पनि उपकरण देखि, पीसी र म्याक, आइओएस र एन्ड्रोइड. कि के बनाउँछ हाम्रो साइट को लागि विशेष छ । हामी प्रदान गर्न यो खेल मुक्त लागि सबै प्लेटफारमहरु भर, र हामी पनि तपाईं दिन मौका गर्न आफ्नो प्रगति बचत, टिप्पणी मा खेल र झण्डा भने हामीलाई केही गलत जान्छ. तर, हामी पक्का छौं, केही गलत जानेछु किनभने हामी परीक्षण everything. आनंद!